विश्वमा यति धेरै प्लेन दुर्घटना हुँदा पनि किन राखिँदैन प्यारासुट ? यस्तो छ कारण – Kavrepati
Home / रोचक / विश्वमा यति धेरै प्लेन दुर्घटना हुँदा पनि किन राखिँदैन प्यारासुट ? यस्तो छ कारण
admin September 28, 2021	रोचक Leaveacomment 368 Views
विश्वको धेरै हवाई दु,र्घटना हुने मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्छ। एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक पनि धेरै छ। डाँडाकाँडाले घेरेको राजधानी काठमाडौंमा अवतरण गर्ने क्रममा कहिले पहाडी डाँडामा ठोकिएर विमान दु,र्घटना हुने गरेको छ।
नेपालमा मात्र हैन विश्वमा प्लेन दु,र्घटना निकै हुने गर्छ। जसका कारण धेरै हवाई कम्पनी घाटामा गएका छन् अनि धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। तर हामी कुरा गर्दा गर्दै यो सम्झिन पुग्छौँ कि प्लेनमा किन प्यारासुट राखिँदैन र यात्रुको ज्यान किन जोगाइँदैन ? यस्तो प्रश्न धेरैले गर्ने गरेका छन्।
१.सबै मानिसलाई प्यारासुट चलाउन नआउनु: प्यारासुटमा उड्न एक बिशेष किसिमको तालिम गरेको हुनु पर्छ। नत्र त्यो मानिसको दु,र्घटना हुन पनि सक्छ। अब तपाई आफैँ भन्नुहोस् कि प्लेनमा यात्रा गर्ने सबै प्यारासुट चलाउन आउने हुदैनन् र यहाँ प्यारासुट राखिँदैन।
२. यो एकदमै गरुङ्गो हुन्छ: एउटा प्यारासुट लगभग १४ केजीको हुने गरेको छ। अब तपाई सोच्नुहोस कि प्रत्येकलाई पुग्ने प्यारासुटको वजन कति हुन्छ। पक्कै पनि धेरै हुने भएकाले यसले इन्धन धेरै खपत गर्ने भएर एयर कम्पनीले प्यारासुट राख्दैनन्।
३. हानथाप हुने भएका कारण: प्लेन दु,र्घटना हुने थाहा पाए पछि सबै आत्तिने गर्छन्। त्यसपछि तँ पहिले कि म पहिले भनेर एक अर्कामा ल,डाईँ गर्दा गर्दै कसैले पनि गर्न नपाउने भएका कारण पनि यो प्लेनमा राख्ने गर्दैनन्।
Previous यिनै हुन् आज दुर्घटना हुदा अकालमै ज्यान गुमाएका आमा छोरा
Next जब दिँदै नदिएको परीक्षामा पास भएको मेसेज आयो…